Monthly Bonus For August 2020 ? Super Silver ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 2,400 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Hnin Wai Soe (FB-000050) Zu Mon Hlaing (FB-000152) Ei Ei Phyu (FB-000080) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Super Silver Agent တို့ August လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 2,400 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Super Silver အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (7) သိန်း (8) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For July 2020 ? Super Silver ? Beaute Cafe အထုပ် 700 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Ei Ei Thae Po Khin Saw (FB-000014) Beaute Cafe အထုပ် 600 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Thae Thae (FB-000004) Kay Thi Myint Kyu (FB000782) Kyaing Kyaing Si (FB-000086) Zin Mi Mi Ko (FB-000623) K Zin Win (FB-000017) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Super Silver Agent တို့ July လအတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 700 ကျော် နှင့် 600 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Super Silver Agent အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus Beaute Cafe အထုပ် 700 ကျော်အတွက် ?ငွေသား (6) သိန်း (8) သောင်း ကျပ်တိတိ Beaute Cafe အထုပ် 600 ကျော်အတွက် ?ငွေသား (5) သိန်း (2) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။